Lifepo4 Batrị, Lithium Iron Phosphate Batrị - Polymer
Batrị OEM & ODM ọrụ nabatara
Dabere na ihe ndị ahịa chọrọ, ndị ọrụ injinịa họpụtara mkpụrụ ndụ ndị ahụ, hazie BMS, kpochie mkpụrụ ndụ, mee nyocha ahụ. Anyị ji afọ ojuju nyeju ndị ahịa anyị afọ. Mpempe emebere emebere emebere emebere emebere ya na LG / Samsung / Sanyo / Panasonic / Sony batrị.100% Nkwupụta nkwa dị mma. Biko kpọtụrụ anyị maka ibu n'efu na ọrụ batrị gị.
Nkwado R & D
Dịka onye nrụpụta ọkachamara enwere ihe dị injinia 30 na PLM R&D otu gụnyere 5 PHD, 10 MFD na Bachelor 15. Ihe dị ka nkeji 30 Akụrụngwa nrụpụta akpaka, 25 nubit Semi-akpaka akụrụngwa na ahịrị 8 mmepụta dị na ụlọ ọrụ anyị.
Nzipu oge, na PLM anyị ghọtara na otu n'ime ihe kachasị mkpa nke ndị ahịa anyị bụ oge. Anyị na-elekọta ka nnyefe anyị na-aga n'ihu dị ka ogo anyị. Kacha mma: Nkwa nke ngwaahịa bu nke kachasi nma bu ihe kacha mkpa. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji ahọrọ mgbe niile itinye ego na teknụzụ dị elu na etiti R&D anyị. Ngwaahịa pụrụ iche: gụnyere akụ nke ike ụwa kachasị mfe, PLM na-enye ọtụtụ ngwaahịa kachasị mma iji gboo mkpa na ọchịchọ ndị ahịa. Ezigbo ọrụ ndị ahịa: Otu ihe na-echekarị ndị ahịa anyị na-eso anyị bụ mkpa ọfụma maka ọrụ ndị ahịa a pụrụ ịdabere na ya ma anyị na-elekọta ajụjụ ọ bụla tupu ma mgbere ahịa.
Ngwongwo ShockSpread TM anyị
Shenzhen Polymer Batrị CO., LTD ka atọrọ na 2014, bụ ọkachamara na-eduzi ndị na-emepụta batrị lithium ion nwere ihe karịrị afọ 5 akụkọ ihe mere eme na China. Ngwaahịa kachasị bụ batrị polima, enwere ike ịgbanye batrị 18650, batrị e-igwe kwụ otu ebe, batrị lithium ma ọ bụ oru batrị ọ bụla ahaziri nke ọma. Anyị nwere ike ị nweta otu ụzọ nrịba na ngwaahịa niile sitere na batrị gaa na batrị dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Ihe Ngwaahịa: Ngwa: Ihe egwuregwu, yslọ Ahịa ...
Nhazi dị elu ahaziri 18650-4s 14.8v 3400mAh…
Product Ihe: Model: PLM18650-4S1P elu ọnụ ...
Factory price Mankeumman mma 22.2v 900mah analysis ...
Ihe omuma ahia: Model: PLM-NH2057QE34 Batrị…
CPAP smart batrị na ngosipụta ike na-ewu ...
Na-ere ọkụ 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah lithium ...
Product Ihe: Model: PLM-36v20ah Battery Pa ...
Battery ụlọ ọrụ na-ere ahịa 5000mah 3.7v li -...
Ihe Ngwaahịa: Okwu Mmalite nke PL ...
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ anyị na - emepụta ngwaahịa mbụ nke ụwa na-agbaso ụkpụrụ nke ịdị mma na mbụ. Ngwaahịa anyị enwetawo aha dị mma na ụlọ ọrụ yana oke ahịa n'etiti ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ...
Ngwaahịa kachasị ọhụrụ
COVID-19 na-eme ka batrị na-esighi ike, Sams ...
Battery.com mụtara na Samsung SDI, a b ...
Northvolt, obodo izizi nke Europe ...
Dabere na akụkọ mgbasa ozi si mba ọzọ, ndị E…
Mmụba nke ọnụ ahịa akpọnwụwolarị…
Na nkeji nke abụọ nke 2020, impo…